Ntụle 5 mgbe ịchọta ngwa mkpanaka gị maka ahịa ndị Japan | Martech Zone
Ntụle 5 mgbe ịchọta ngwa mkpanaka gị maka ahịa ndị Japan
Dị ka akụ na ụba nke atọ kachasị ukwuu n'ụwa, enwere m ike ịghọta ihe kpatara ị ga-eji nwee mmasị ịbanye n'ahịa ndị Japan. Ọ bụrụ na ị na -eche ka ngwa gị ga -esi banye n'ahịa ndị Japan nke ọma, gaa n'ihu na -agụ ka ịmụtakwuo maka nke a!
Ahịa Mobile Mobile nke Japan
Na 2018, ahịa eCommerce nke Japan ruru $ 163.5 ijeri USD na ahịa. Site na 2012 ruo 2018 ahịa eCommerce nke Japan toro site na 3.4% ruo 6.2% nke ahịa azụmaahịa niile.
Nchịkwa azụmaahịa mba ụwa
Kemgbe ahụ ọ toro nke ukwuu, ọkachasị n'ihe gbasara ngwa mkpanaka. Statista kọrọ na afọ gara aga, ahịa ọdịnaya ekwentị mkparị ruru ijeri 7.1 puku ijeri Yen na ihe dị ka nde ndị ọrụ ekwentị 99.3 dị ka Machị 2021.
Ngwa mkpanaka kacha arụ ọrụ na nke a na -ejikarị bụ ọrụ ozi LINE, nke LINE Corporation na-arụ, nke sitere na Tokyo nke Navier Corporation, ụlọ ọrụ South Korea. Kemgbe ahụ, ha agbasalala Pọtụfoliyo ha na LINE Manga, LINE Pay na LINE Music.
Ọ bụrụ na ị na -eme atụmatụ ịbanye eCommerce Japan na ahịa ngwa, ị nwere ike chọọ ịtụle ịkọwa ngwa gị kama ịsụgharị ya, nke anyị ga -atụle na ngalaba anyị na -esote.
Kedu ihe kpatara atụmatụ mpaghara gị ji dị mkpa
Ofe Tirosh nke Tomedes dere akụkọ banyere ihe niile ị chọrọ ịma gbasara imepụta atụmatụ mgbakwụnye maka ịga ụwa niile. Ọ kọwara na ịwapụta ebe a bụ usoro nke iwulite njikọ aka na njikọta na mpaghara ebumnuche gị site na imepụta ahụmịhe ndị ahịa/onye ọrụ yana ngwaahịa ahaziri maka mmasị ọdịbendị ha.
Tirosh kọwara na a bịa n'ịkọwa mpaghara, ịkwesịrị ịtụle imepụta atụmatụ nke ga -akọwapụta ikpo okwu gị, ọwa ahịa, yana ngwaahịa/ọrụ.
Martech Zone kwuru na ọ bụrụ na ị na -eme atụmatụ iji ngwa gị gaa ụwa niile, ịkwesịrị ịdebe ya maka ihe dị ka 72% nke ndị ọrụ ngwa anaghị asụ bekee, ha nyere Evernote dịka ọmụmaatụ. Mgbe Evernote banyere n'ahịa China, ha gbanwere aha ngwa ha ka ọ bụrụ Yinxiang Biji (Memory Note), nke mere ka ọ dịrị ndị ọrụ China mfe icheta aha ika ahụ.
Mana ọ dị mkpa imepụta atụmatụ ịkọwapụta mpaghara, ma ọ bụrụ na ị na -eme atụmatụ ịbanye n'ahịa Japan?
Ọ dị mma, ị maara na na Japan Facebook, weebụsaịtị na ngwa mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị n'ụwa niile, abanyeghị n'ahịa?
Techinasia kọrọ na Ndị ahịa Japan uru ihe anọ ma a bịa na netwọkụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya ha na -eji:
Njirimara onye ọrụ dị elu
Nghọta ọha dị ka ikpo okwu ama ama
Ezigbo isi iyi nke ozi
Dabere na nyocha nke Techinasia, ndị niile sonyere ha zara na Facebook enwechaghị nchekwa. Ọzọkwa, ha zara na ihu igwe Facebook “mepere emepe, nwee obi ike, na -eme ihe ike” na ọ bụghị “enyi ndị Japan” n'ihi na ọ na -agbagwoju ha anya ma dị mgbagwoju anya.
N'ikpeazụ, dị ka isi mmalite ozi, ndị sonyere kwuru na ha masịrị karịa iji Twitter karịa Mixi (usoro mgbasa ozi mgbasa ozi n'ịntanetị kachasị amasị) na Facebook.
Facebook emepụtabeghị atụmatụ atụmatụ ime obodo tupu ime ka usoro mgbasa ozi mmekọrịta ya dị n'ihu ọha ndị Japan. Ọ bụghịkwa naanị ha ka ha na -emezughị n'ịchọpụta ikpo okwu ha n'ịntanetị.
eBay bidoro na ngwụcha 1990s, agbanyeghị, ka ọ na -erule 2002 ọ nwere arụmọrụ n'ihi ọtụtụ ihe, dịka Japan nwere iwu siri ike nke ire imegharị ihe maka iji or ihe ejigoro elektrọnik ọ gwụla ma ha nwere ikike ime ya. Ihe ọzọ kpatara na ha adaghị ahịa ahịa ha na mba ofesi bụ na ha aghọtaghị nke ahụ Ndị Asia na -eji ntụkwasị obi akpọrọ ihe. Ha emepụtaghị ikpo okwu nke na -enye ndị na -azụ ahịa ohere isoro ndị na -ere ahịa kwurịta okwu iji wulite ntụkwasị obi na ha.
Ọ bụ ihe a na -apụghị ịgbagha agbagha na ọ bụrụ na ha mere atụmatụ ikpo okwu ha, ha gaara abanye n'ahịa Japan nke ọma. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya n'ihi na mpaghara ebumnuche, ndị Japan na -azụ ahịa, nwere omume ọdịnala dị iche iche na akparamagwa ọha ma e jiri ya tụnyere mba ọdịda anyanwụ.
Ndụmọdụ 5 mgbe ịchọta ngwa mkpanaka gị maka ahịa ndị Japan
Nke a bụ echiche ise mgbe ị na -achọta maka ahịa ndị Japan:
Chọta Ndị Ọkachamara Nhazi Obodo - Site na mmekorita ya na ndị ọkachamara gbasara mpaghara, ị nwere ike mee ngwa ngwa nke imepụta atụmatụ mpaghara n'ihi na ha ga -enyere gị aka nyocha mpaghara ị lekwasịrị anya, chọta ikpo okwu na ọdịnaya gị, na ndị ọzọ. Mgbe ị na -ekpebi ndị ọkachamara gbasara mpaghara, lelee nyocha ndị ahịa ha na weebụsaịtị dị ka Trustpilot, tulee ha site n'aka ndị na -enye ọrụ ebe ọzọ na ọnụ ahịa na ịdị mma nke ịkọwapụta. Ị kwesịrị ịjụ ma ọ bụrụ na ha na -enye akwụkwọ ikike yana nwee teknụzụ na nka n'ịchọpụta ngwa. Nke a bụ iji hụ na ị na -enweta ndị ọkachamara mpaghara kacha mma ka ha na -ekere oke na ịhụ na ịbanye n'ahịa Japan nke ọma.
Ghọta ebe ebumnuche gị - Dịka m kwuru na mbụ, ndị ọkachamara gbasara mpaghara ị ga -arụkọ ọrụ nwere ike inyere gị aka ime nyocha ahịa mpaghara. Ewezuga akụkụ asụsụ na akụnụba nke nyocha gị, ị kwesịrị iburu n'uche nuances nke ọdịbendị. Dị ka ekwuru, otu n'ime ihe kpatara na Facebook abanyeghị n'ahịa Japan bụ n'ihi na ndị ọrụ Japan na -ahọrọ amaghị aha ma e jiri ya tụnyere ikpughe njirimara ha. Martech Zone dere ntuziaka bara uru maka otu esi ere ngwa mkpanaka gị nke na -emetụta ihe niile dị mkpa. Ị nwere ike tinye ndụmọdụ ha dị ka ịmata ndị asọmpi obodo gị na ịmụta ihe n'aka ha.
Gbanwee na Ihe Omume na Omenala - Ihe ọzọ ị ga -atụle bụ nyocha ihe omume ọdịnala na mpaghara wee mezie ngwa gị gburugburu ha. Na Japan, mgbanwe nke oge na -adị ezigbo mkpa ka ọtụtụ emume omenala ha na -emetụta ya. Ị nwere ike ịkwadebe tupu oge eruo wee mepụta kalenda omenala. Ọkara dere na n'oge ezumike ogologo oge, ndị ọrụ Japan na -etinye oge dị ukwuu na ngwa mkpanaka. Ogologo ezumike ndị a na -eme n'oge Afọ Ọhụrụ, Golden Week (izu gara aga nke Eprel ruo izu mbụ nke Mee), na Izu Ọlaọcha (n'etiti Septemba). Site n'ịmara ozi a, ọ nwere ike inyere gị aka ịkwalite UX ngwa gị na mmekọrịta onye ọrụ n'oge ndị a ndị ọrụ na -arụsi ọrụ ike.
Na -arụkọ ọrụ na ndị na -emetụta mgbasa ozi mmekọrịta na mpaghara - Ndị ọrụ Japan ji ntụkwasị obi iwulite ntụkwasị obi na ụlọ ọrụ na ụdị. Otu ụzọ ịre ahịa ngwa mkpanaka gị bụ site na imekọ ihe na ijikọ ndị na -emetụta mgbasa ozi mgbasa ozi Japan. N'ihi na ndị na -emetụta mgbasa ozi mmekọrịta nwere ezi nghọta nke ndị na -ekiri ha na igwe mmadụ nke na -eso ha, nghọta ha gbasara ngwa gị nwere ike ịba uru. Mana m na -atụ aro ka ị mee nyocha gị gbasara ndị na -emetụta mpaghara gụnyere ụkpụrụ na ebumnuche ụlọ ọrụ gị. Ihe ọzọ a ga -echebara echiche bụ imekọ ihe ọnụ na ụlọ ahịa na ndị na -ere ahịa mpaghara n'ihi na ọ ga -eme ka ntụkwasị obi nke ngwa gị dịkwuo elu ma mee ka ọ dịrị ndị ọrụ ebumnobi gị mfe itinye ya na ndụ ha kwa ụbọchị.
Mepee ọnụahịa gị - Otu ụzọ isi mee imikpu UX nke ngwa gị bụ site n'ịchọta ọnụ ahịa ngwa gị. Naanị n'ihi na ọ na -akụda mmụọ ịtụgharị Yen na USD yana nke ọzọ. Ọnụego nchigharị na -agbanwe agbanwe oge niile, yabụ, ọ baghị uru ịnweta ego ngwa gị adabaghị na ego mpaghara mpaghara gị.
Ịmepụta atụmatụ atụmatụ mpaghara chọrọ otu na netwọkụ siri ike site na ịkpọ ndị ọkachamara na -ahụ maka mpaghara ka ha na ndị na -eme ihe na mpaghara na ndị na -ere ahịa na -emekọrịta ihe. Ọ bụkwa ihe ezi uche dị na ya n'ihi na, n'adịghị ka ntụgharị asụsụ, ihe ị na -eme mgbe ị na -achọpụta ngwa gị bụ iwulite obodo ndị ọrụ na -atụkwasịghị naanị akara ngwa gị kamakwa, na -eguzosi ike n'ihe na ya.
Tags: AsiaebayEvernoteJapanahia japanahịa ecommerce japanJapanụlọ ọrụ lineegwu ahịrịakwụ ụgwọmobile ngwaNchọgharị ngwa mkpanakaọnụ ọgụgụtechinasiandoputa